‘आफ्नै जीवनलाई बिर्सेर हिँडिएछ हौ’ 'टाढोमा बसेको माया गहिरो जान्छ नि, मलाई यहीँ बसेर नेपालीको मन जितूँ लाग्यो हौ'
शकुन्तला जाेशी शुक्रबार, असोज ९, २०७७
२०७६ सालको जगदम्बाश्री पुरस्कार वरिष्ठ संगीत साधक शान्ति ठटाललाई प्रदान गर्ने घोषणा भएको छ । साढे ६ दशकदेखि संगीत साधना गर्दै आएकी दार्जिलिङ निवासी ८२ वर्षीया ठटालले दुई सयभन्दा बढी गीतमा संगीत गरिसकेकी छन् । संगीत साधनाको विविध उतारचढावबारे नेपाली पब्लिककी शकुन्तला जोशीले ठटालसँग गरेको कुराकानी उनकै भाषिक लयमा ।
जगदम्बा श्री पुरस्कारबाट सम्मानित हुने खबरले तपाईंलाई कस्तो लागेको छ ?
मलाई नि कोही कलाकारले नै फोनमा बधाई दिदैं भन्नु भो, तपाईंले नेपालबाट यस्तो पुरस्कार पाउनु भो, म एकदमै खुसी छु, हामी सप्पै कलाकार खुसी छौं । म त अल्मलमा परें, के हो कसो हो, विश्वासै लागेन । भरै भरै त नेपालबाटै फोन आयो हो, बल्ल विश्वास भयो । अनि बसेर सोचें, म यो पुरस्कारको योग्य थिएँ कि थिइनँ हुँला ? यत्रो गौरवशाली पुरस्कारबाट सम्मानित हुन पाउने कुरा मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ हो । गीताले भन्छ, कर्म गर्नु फलको आशा नगर्नु ।
शान्ति ठटाल आफ्नो घर दार्जिलिङमा
खबर पाएको दिन निरन्तर हिडिआएको त्यो बाटोबारे सम्झि बसें । पुरस्कारको खबर पाएपछि यति धेरै बधाईहरु आए कि वरिष्ठ संगीतकारदेखि नयाँ पुस्तासम्मका धेरै शुभचिन्तकहरुले सम्झिनु भएको छ । सप्पै जना यति साह्रो हर्षित भए कि मभन्दा बेसी खुसी उहाँहरुलाई पो लागेको । यो महसुस गर्दा चै नी म खुसीले साँच्चै भावुक भएँ । उहाँहरुले त्यो पुरस्कारको लागि तपाईं नै योग्य हुनुहुन्थ्यो भनेर भनिरहनुहुँदा म दोब्बर खुसी भएको छु । अब के भनौं !
तपाईं आफ्नो संगीत साधनाको स्वर्णिमकाललाई कसरी सम्झनु हुन्छ ?
संगीत क्षेत्रमा लाग्न चासो लिएकाहरु थुपै्र हुन्छन् हगी । तर गायक र गायिका भनेपछि नी त्यो चैं कण्ठबाट हुने संगीत हो । कण्ठ संगीतको लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा आवाज चाहिन्छ । सानो छँदादेखि नै मलाई गीत गुन्गुनाउने रहर थियो, जति गायो त्यति मिठो लाग्थ्यो । तर त्यो बेला नि मलाई आफ्नो गाउने क्षमताबारे थाहा छैन हो । घरमै उठ्दा, बस्दा, खेल्दा पनि गाइबस्ने । स्कुलकालमा पढाईमा मन नलाग्ने, ध्यान जति गीतमै हुन्थ्यो । नेपालबाट महाकवि देवकोटा आउनु भएको कार्यक्रममा मलाई स्वागत गीत गाउन लाएपछि मेरो सांगीतिक यात्रा सुरु भएको हो है । विस्तारै मलाई नाटकहरुमा गाउन लगाइयो, विस्तारै आफूलाई पनि आफ्नो क्षमता यसैमा पो छ कि भन्ने लाग्यो । स–सानो गरी मेरा पाइला अघि बढे, कहीँ रोकिएन । मेरा गीतहरु रेकर्ड हुन थाले ।
त्यो बेला हाम्रो समाजतिर नेपाली गीत उति साह्रो प्रचलित थिएन हो । म मोहम्मद रफी, लता मंगेश्करहरुको गीत गाउँथें । पछि रेडियोतिर मित्रसेन, तारादेवी, मेलवादेवी, नातिकाजी, शिवशंकर, बच्चु कैलाशलगायतका गीत सुन्दै गएँ । त्यतिबेलातिरै उहाँहरुको गीत रेकर्ड भइसकेका रहेछन् । त्यो बेला उहाँहरु देशको कलाकार हुनुहुन्थ्यो, हामी एउटा सानो राज्यको, पहाडी भेगमा बसेर संघर्ष गर्दै थियौं । रेडियोमा उहाँहरुको गीत सुन्दै जाँदा म थप प्रोत्साहित हुँदै गएँ हो ।
शान्ति ठटाल जनता टिभीको कार्यक्रममा
अन्त मैले सोचें अब गीत गाउने नै हो भने अरुको अनुकरण गरेर त हुँदैन । नियमपूर्वक संगीतको शिक्षा लिनु आवश्यक छ भन्ने महसुस गरेर कलकत्ता जान मातापिता, गुरुजनबाट अनुमति पाएँ । त्यहाँ रविन्द्र भारती विश्वविद्यालयबाट कण्ठ संगीत विषयमा तीन वर्ष सिकें । तर, संगीत सिकें भनेर भन्नु हुँदैन, यो अथाह छ, गहिरो छ कि साँच्चीकै संगीतकार हुन एक जुनी पर्याप्त हुँदैन । बुझ्नुभयो ?
तपाईंलाई चलचित्रको गीत गाउने अवसर कसरी जुर्‍यो ?
प्रविधिको खासै विकास नभइसकेको त्यो समयमा तपाईंहरु कसरी काम गर्नुहुन्थ्यो ?
त्यतिबेलाको सिचुएसनमा चैं नि हामीलाई ठिकै लाग्थ्यो । किनभने प्रविधि अहिलेको जस्तो होला भनेर कल्पना पनि गरेको थिएन । हामी त्यतिमै सिमित थियौं । एउटा हार्मोनि, तबला बेसी भए एउटा गितार हुन्थ्यो, अरु केही नि हुँदैनथ्यो हो । तर स्वर मीठो र राम्रो कम्पोजिशन भएपछि त्यही एउटै हार्मोनिमा पनि संगीत हुन्छ नै क्या । त्यसले सुन्नेको मन छुन्छ पनि । तर त्यतिबेलाको हाम्रो शक्ति भनेको लाइभ प्रस्तुति दिनु हो । नाटकहरुमा स्टेजमै अभिनय हेर्दै संगीत गर्नुपथ्र्यो । त्यस्तो जीवन्त हुन्थ्यो ।
तपाईंको चाहिँ समकालिनहरुसँगको संगत कस्तो हुन्थ्यो ?
शान्ति ठटाल पँलेटी श्रृंखलामा
समय क्रमसँगै दार्जिलिङमा थुप्रै संघसंस्था पनि खुले, कलाकार पनि आए । त्यो बेला हाम्रोतिर संगीत जागरणको काल थियो क्या, बुझ्नु भयो त ? प्रोफेसनल भएकै थिएन । संगीतलाई पेशा व्यवसाय नभएर समाजका लागि गर्ने कर्तव्य ठानिन्थ्यो । त्यसो त नाटक, नृत्यलगायत कला र साहित्यका सप्पै क्षेत्रमा सप्पैबीच मेलमिलाप हुन्थ्यो । आफ्नो कर्मको क्षेत्रलाई त्यसबेला सेवा नै ठानिन्थ्यो । हामीहरुबीच रिस राग भन्ने थिएन, पवित्र र स्वच्छन्द रुपमा संगीत साधनमा थियौं । त्यसै भएर हाम्रो काललाई दार्जिलिङको इतिहासमा स्वर्ण युगको रुपमा मानेको थियो ।
अन्य भाषामा गाउन किन चाहनु भएन ?
म एकदमै लाटी मान्छे, कलकत्ता त्यो ठूलो महानगरमा कसरी एडजस्ट भएँ होला भन्ने लाग्छ । तर त्यो विश्वविद्यालयको वातावरण एकदमै सहयोगी खालको थियो हो । मेरा साथीहरु, प्रोफेसर गुरुहरुले मलाई एकदमै राम्रो मान्ने, बुझ्नु भयो त ? पहाडबाट आएको, अलग्गै भाषी भनेर मैले फरक व्यवहार पाइनँ । त्यहाँ मैले रविन्द्र संगीत पनि सिक्नु पथ्र्यो, बुझ्नु भएन ? शास्त्रीय संगीतबाहेक भजन, बंगला लोकगीतसम्म सिक्नुपथ्र्यो । बंगला लोकगीतको गुरुले कक्षामै भन्नुहुन्थ्यो, यो केटीले हाम्रो गीतको भाषा बुझ्दैन र पनि यति डुबेर गीत गाउँछ, भाषा बुझे झन् कस्तो गाउँथ्यो होला । म चुपो लागेर सुन्थें मात्रै हो ।
शान्ति ठटाल कान्तिपुर टिभीको कार्यक्रम ‘सुमन संग’मा
दार्जिलिङ क्षेत्रका धेरै कलाकार नेपाल आएर यतै रहनु भयो, तपाईंलाई चाहिँ यता आएर साधना गरौं भन्ने लागेन ?
त्यो लागेन मलाई । किन भन्नोस् त ? टाढोमा बसेको जुन माया हुन्छ नि, त्यो गहिरो र लामो जान्छ कि । छेऊमा राम्रो हुँदैन (हाँस्दै), बुझ्नु भयो ? जहीँ बसेपनि संगीतको त कुनै सिमा छैन हो, मलाई यही बसेर नेपालीको मन जितुँ लाग्यो । यहीं बसेर सकेको योगदान दिएँ भन्ने लाग्छ ।
तपाईंले धेरै माया प्रेम, वियोगकै गीत मात्रै गाएको देखिन्छ नि ? तर श्रमजीवि मानिसको जीवन संघर्षलाई सम्बोधन गर्ने गीत किन गाउनु भएन ?
गाइएको हो नि सुरुसुरुतिर, नगाएको हैन । तर, त्यो बेला रेकर्ड गर्ने, संरक्षण गर्ने प्रविधि थिएन । हिफाजत गर्नुपर्छ भन्ने जागरुकता पनि थिएन । चिया कमानका मजदुरहरुमाथि अगमसिंह गिरीले लेख्नुभएका गीत समूहले गाएका थियौं । चिया मजदुरहरुमाथि अरु थुप्रै गीत गायौं तर संरक्षण भएन ।
जीवनको यो उमेरसम्म उतिकै उर्जाशील हुनुहुन्छ, यतिबेला के गर्दै हुनुहुन्छ ?
जीवन रहेसम्म त उर्जा हुनै प¥यो नि हैन र ? संगीतको कामहरु पनि गरिरहेकै थिएँ कि, यो भाइरसले अहिले थाँतीमा छ, गर्छु अब । अहिले चैं कि म केही किताबहरुको भूमिका लेखिदिने काम गर्दैछु । यस्तो अनुरोधहरु आइबस्छ नि मलाई । त्यो चैं गर्दै नै छु ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज ९, २०७७ १०:४८